Adda Bilisummaa Oromoo: Walhimannaa hoggantoota ABO irratti Boordiin Filannoo Biyyaalessaa yaada furmaataa dhiheesse – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioAdda Bilisummaa Oromoo: Walhimannaa hoggantoota ABO irratti Boordiin Filannoo Biyyaalessaa yaada furmaataa dhiheesse
Waldhibdee Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) keessa jiru ilaalchisuun Boordiin Filannoo Biyyaalessaa marii taasiseen, gareen lamaanuu bakka bu’oota filatanii akka ergan murteessuu beeksise.
(bbcafaanoromoo)–Ji’a dabre keessa Koreen Hojii Raawwachiiftuu ABO waajjira muummee Gullalleerraa ibsa miidiyaaleef kenneen, hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawuud Ibsaa hayyu durummaarraa ittisuu beeksisee ture.
Gama kaaniin ammoo, Obbo Daawud Ibsaan dubbii himaa dhaabichaati kan jedhaman Obbo Mohaammad Raggaasaa, ibsi kenname dhaabicha bakka hin bu’u jedhanii turan.
Qaamoleen kunniin: jechuunis Obbo Araarsoo Biqilaa fi Daawud Ibsaa, iyyata isaanii Boordii Filannoo Biyyaaleessaa Itoophiyaaf galfataniiru.
Xalayaan Obbo Araarsoo Biqilaan fa’i galfatan, koreen hojii raawwachiiftuu dhaabichaa Obbo Daawud Daawud Ibsaarratti murtee ugguraa dabarseera kan jedhu akka tahe Boordichi ifa godheera.
Gama kaaniin ammoo xalayaan Obbo Daawud Ibsaan fa’i galfatan ammoo – miseensota gumii shanee kan tahan: Araarsoo Biqilaa, Toleeraa Adabaa, Atoomsaa Kumaa fi miseensota gumii sabaa (koree giddugaleessaa) kan tahan Qajeelaa Mardaasaa fi Arbichoo Diimaa haga yaa’ii ittaanutti ugguramuusaanii akka mirkaneessan kan gaafatu ture.
Boordichi maal murteesse?
Waldhibdee dhaabicha keessa jiru ilaalchisuun marii taasiseera kan jedhu Boordichi, murtee dabarsuus beeksise.
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa walgahii guyyaa Kamisaa taa’een, gareen Obbo Araarsaa nama tokko, akkasumas garee Obbo Daawud keessaa ammoo nama tokko filatanii akka dhiyeessan murteesse.
Boordichi ammoo ogeessa bakka bu’oota qamoota lamaanii kana walitti qabummaan gaggeessu tokko filachuufis murteesse.
Kanaanis miseensota boordichaafi qaamolee kanneeniin filatamaniin, yeroof yaa’iin kan hundeeffamu taha.
Bakka bu’oonni kunniin yookaan akka jecha boordichaatti ogeeyyiin, boordichi filatu, dhimmicha ilaaluun yaada dhiyeessaniirratti hundaa’uun, boordichi murtee isa dhumaa akka kennus beeksiseera.
Paartileen siyaasaa keessoosaaniitti rakkoon wayita mudatuufi boordichaaf wayita iyyata dhiyeessan, dhimmicha ilaaluun yaada murtoo dabarsuuf labsiin aangoo kennameef akka qabu, boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera.
Amma dura maaltu ta’e?
MADDA SUURAA,SAGALEE BILISUMMAA OROMOO
Baatii Adooleessaafi Hagayya bara dabre keessa, Hayyu Dureen dhaabichaa ‘ugguramuu’ ibsuun guyyoota 10’f manaa akka hin baane taasifamuu himaniiru. Dhimma kanarratti poolisiin waan dubbate hin qabu. Bakka Hayyu Dureen hin argamnetti walgahii Koreen Hojii Raawwachiiftuu dhaabichaa gaggeesse ijoo dubbii ture. Ta’us, beekkamtiifi walhubannaa Hayyu dureen gaggeeffame jechuun Obbo Araarsoo Biqilaa yeroos BBC’tti himanii ture. Ta’us, ergasii eegalee hoggantoonni ABO yeroo dheeraaf ala turaniifi waggaa lama dura biyyatti deebi’an wal himannaa garaa garaa walirratti dhiheessaa jiru. Kana sababeeffachuun ABO’n lamatti qoodamaa jira jechuun kan gaafataman Obbo Daawud ‘hin ta’u jechuun hin danda’amu’ jedhanii kana dura BBC’f deebisanii ture. Haa ta’u malee, gareen Obbo Araarsoon hogganamu qoodinsa kana dura dhaabicha keessa mudataa turef kan gaafatamu Obbo Daawudidha jechuun ibsa dheeraa xumura torban darbe baasen himuun ni yaadatama. Amma dura akka gabaasnetti waajjirra muummee dhaabichaa Gullallee jiru kan itti fayyadamaa jiru Hayyu – duree Itti – aanaa dhaabichaa Obbo Araarsoo Biqilaadha. Obbo Qajeelaan Obbo Daawud waan dhorkamaniif Obbo Araarsoon itti gaafatamaa dhaabaa fudhatanii socho’aa jiru jechuun ji’a dabre keessa miidiyaaleef ibsanii turan.